Varane: Mbape waxaa uu ka yimid Aduunyo Kale | Universal Somali TV
Daafaca dhexe ee kooxda kubada cagta Real Madrid iyo Xulka France Raphael Varane ayaa amaan dusha kaga tuuray da'yarka ay isku xulka yihiin oo lagu magacaabo Kylian Mbappe kaasi oo door weyn ku lahaa in dalkiisa uu ku guuleysto koobka aduunka.
Mbappe ayaa la siiyay abaal marinta da'yarkii ugu wanaagsanaa koobkii aduunka isaga oo dhaliyay afar gool oo mid ka mid ah cayaartii kama danbeysta uu dalkiisa kaga saaciday in ay Croatia ka talaabsadaan.
Mar waxa laga weydiiyay Varane ciyaariyahan kaan aqoonta uu u leeyahay ayaa waxaa uu sheegay in uu ka hor yimid mar ay wada cayaareen Real Madrid iyo PSG kulan ka tirsanaa koobka kooxaha horyaaalada Yurub.
Waxaa uu sidoo kale intaa ku daray in Qibrada uu leeyahay Mbape iyo da'da uu jiro ay tahay wax kala fog uuna la mid yahay ruux jira 25 ilaa iyo 30 sano jir.
Varane ayaa ku kaftamay in Mbape uu ka yimid aduunyo kale oo aan aheyn tan hada lagu nool yahay.
Kylian Mbape ayaa muteystay amaan badan oo kaga timid bahda caayaaraha kadib markii uu fure uu u noqday guushii France ay ka gaartay koobka aduunka ee lagu qabtay ruushka sanadkan.
Kan-xigaBahda cayaaraha oo taageertay go,aank...
Kan-horeFrance oo Markii labaad ku Guuleysata...
C.Ronaldo oo u dheeli doonin xulka dalkiisa xilli lagu eedeynayo kufsi uu geystay
40,458,785 unique visits